Fanaanka Weyn Dalmar Yare Oo Banaanka Keenay Muuqaalka Gabadhii Uu Guursan Lahaa (Daawo Sawirada) - iftineducation.com
iftineducation.com – Wiilka Dheer ee maalmahan masraxa soomaalida qabsaday isla markaana u sharaxan Abaalmarinta Fanaanka Sanadkan 2012 Dalmar Yare ,ayaa soo bandhigay Muuqaalka gabadhii uu guursan lahaa gabadhaas oo lagu magacaabo Samiira C/raxmaan.
Dalmar ayaa wayahanba xariir la lahaa gabdhaan lakiin ugu danbeen waxuu ku dhawaqay Smiira in ay tahay gabadha uu la aqal galayo dhawaaan.
Dad badan ayaa u maleeyo Dalmar Yare gabdha uu guursanayo in ay la dhalatay fanaanda ay Darlamy Saaxiibada yihiin ee Hodan C/raxmaan lakiin taas run mahan Hodan iyo Samiira waxay wadagaan kaliya magaca C/raxmaan oo ah magacyada labadooda Aabe.
Fanaanka Dalmar Yare ayaa tageera badan ku yeeshay heesihii kala ahaa Dayniile iyo Dhunkasho waxayna labadaas hees u noqdeen heeso u qarxay fanaanka si weyn uu magac ugu yeeshay.
Dhanka kale Fanaanka Dalmar Yare,ayay dad badan aaminsanaayeen in uu xariir Jaceyl la lahaa fanaanadi dhawaan la guursaday ee Farxiyo Kabayare walow dad badan ay qanceen markii arkeen Farxiyo Kabayare oo la guursaday iyo Dalmar Yare oo Arooska Ka Qaaday Hees Romance Ah.